Ciidamo taabacsan dawladda Soomaaliya oo qabsaday degmada Luuq. [Akhris …] – Radio Daljir
Ciidamo taabacsan dawladda Soomaaliya oo qabsaday degmada Luuq. [Akhris …]
Agoosto 19, 2009 12:00 b 0
Luuq, Aug 19 – Ciidamo xooggan oo taabacsan dawladda federaalka ah ee Somaliya ayaa saakay waabarigii la wareegay gacan ku haynta degmada Luuq ee gobolka Gedo, oo in muddo ah ay gacanta ku hayn jireen ciidamada ururka Xisbul-Islaam.
Lawareegidda demada Luuq ee ay gacanta ku dhigeen ciidamada taabacsan dawladda KMG ah ee Soomaaliya, ayaa la sheegayaa in aan wax dhiig ah ku daadan oo ay si nabad-galyo ah kula wareegeen degmadaasi, lamana garanayo halka ay u baxsadeen ciidamadii Xisbul-Islaam ee gacanta ku hayey degmada Luuq.
Ciidanka saakay la wareegay degmada Luuq ee gobolka Gedo, ayaa ahaa ciidamo in muddo ah taba-barro ku qaadanayey deegaanka doolow ee is maamulka Soomaalida Ethiopia waxayna horay u ahaayeen ciidamadii maamulladii ka talin jiray degmooyinka gobolka Gedo ka kooban yahay iyo waliba kuwii gobollada Baay iyo Bakool, intii aysan la wareegin kooxaha Islaamiyiinta ahi.
Guddoomiyaha gobolka Gedo ee dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Kaliil, lana socday ciidanka saakay qabsaday degmada Luuq oo waraysi siiyey idaacadda Daljir ayaa sheegay si nabdoon in ay ula wareegeen degmadaasi haatanna xaaladeedu ay tahay mid deggan oo aysan ka jirin wax dareen colaadeed ah.
Guddoomiyuhu waxaa uu sheegay in muddo in ay ku howllanaayeen sidii gobolka Gedo gacanta dawladda ugu soo laaban lahaa, taasna haatan ay wax badan ka qobsoomee, wuxuuna intaasi ku daray qorshahoodu in uusan ku koobnayn degmadaasi oo kaliya laakiin ay tagi doonaan dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Gedo iyo gobollada kala ee dariska la ah.
Md. Kaliil, waxaa ka codsaday bulshada degmada Luuq iyo dhammaanba kuwa Soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan ciidanka kana hortagaan cidkasta oo diidan nidaam dawladeed in laga hirgaliyo Soomaaliya.
Qabsashada degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa ku soo beegmaysay xilli dhawaan dariiqada Ahlu-sunna Waljameeca ay la wareegtay gacan ku hayanta degmada Beled-xaawo, oo iyana ka tirsan gobolkaasi, waxaana dariiqadaasi lagu tiriyaa in ay gacansaar hoose la leeyiihiin dawladda KMG ah ee Soomaaliya ee hadda ciidamada taabacsan la wareegeen Luuq.
Qanyare oo sheegay in aanay jirin federaalnimo, kuna tilmaamay wadahadalada u socda Puntland & Somaliya sharci darro. [Akhris …]
?Ilaahay iyo annagu xiriir ma lihin? Burcad-badeeda Somalida.! [Akhris …]